आफुले भनेको खुरुखुरु मान्ने राष्ट्रपतिलाई कसैले 'तिमी' भन्दा प्रधानमन्त्रीको मन किन नदुखोस- डिला संग्रौला
८ जेठ, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा.डिला संग्रौलाले र राष्ट्रपतिले सेटिंग र झालझेल गरेको आरोप लगाएकी छिन् ।
हिजो प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तिमी भनेर सम्बोधन गरेपछि आपत्ति जनाएका थिए । उनले उनले गणतन्त्र संरक्षकले संविधान माथि बारम्बार प्रहार गर्ने अनि सम्मान खोज्ने भन्दै प्रश्न उठाएकी छिन् ।
उनले लेखेकी छिन् –राष्ट्रपतिलाई तिमी भनेकोमा खड्ग ओलीलाई चित्त दुखेछ कठैबरा!
गणतन्त्र संरक्षकले संविधान माथि बारम्बार प्रहार गर्ने अनि सम्मान खोज्ने ?
पदिय मर्यादालाई बिर्सेर राजनितिक दलको अमुक ब्यक्ति जस्तो भएर गरिएको कार्यले गणतन्त्रको अपमान भएको छ। आफ्नो सम्मान खोज्नेले कर्तव्य र दायित्व निर्बाह गर्न जान्नु पर्दछ । रास्ट्रपतिज्यु! ‘फलेको वृक्षको हाँँगो नझुकेको कहाँ छ र ?’ भन्ने कुरा थाहा छैन र ? सेटिङ र जालझेल गर्ने अनि सम्मान खोज्ने ? आफ्नो इशारामा लुरुलुरु हिड्ने रास्ट्रपतिलाई कसैले तिमी भन्दा प्रधानमन्त्रीको मन किन नकुडियोस? आफ्नो आङको भैंसी नदेख्ने अरुको आङको जुम्रा ?